Ajọ ifufe na ajọ ifufe kachasị na-emebi ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ifufe na ajọ ifufe kachasị na-emebi ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya
Sergio Gallego | | Ajọ Ifufe, Typhoons
Ugbu a mpaghara Pacific niile nọ na oke ajọ ifufe na oke ifufe, ọ bụ oge dị mma ileghachi anya na oge kachasị njọ nke omume ihu igwe ndị a na-ebibi na akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịbeghị anya. Typhoons na-ahapụ ọtụtụ ihe ọghọm akụ na ụba na mgbakwunye na mmerụ ahụ nke onwe.
Mgbe ahụ, m ga-agwa gị banyere ajọ ifufe ndị ahụ Ha mere akụkọ na afọ ndị gara aga maka ike mbibi ha dị elu.
N’afọ ndị na-adịbeghị anya Typhoon Bohla bibiri obodo Bangladesh tinyere ọwụwa anyanwụ India. O mere na 1970 wee gbuo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mmadụ. Na 10975, Typhoon Nina kụrụ ọtụtụ ihe na China, na-ahapụ ihe karịrị mmadụ 200.000 nwụrụ na mbido ya, yana ọtụtụ mbibi ihe onwunwe.
Otu ajọ ifufe kachasị mebiri emebi bụ Mitch, ebe ọ bụ na 1998 ọ gara gburugburu Central America, na-ahapụ ọnụọgụ nke ọnwụ 10.000 na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-efu. Na 2013 Hurricane Yolanda bụ etiti akụkọ n'ụwa niile ebe ọ bụ na o bibiri akụkụ nke Philippines na-ahapụ ọnụọgụ ikpeazụ nke 6500 nwụrụ na ọtụtụ nde mmadụ ndị nnukwu ọnụọgụ ihe metụtara.
Cyclones bụ oké ifufe nke na-etolitekarị n'oké osimiri nke mmiri ọkụ, na-eme ka ifufe dị ike na oke mmiri ozuzo mgbe ị na-eme ala. Na mpaghara Atlantic, eji oke ifufe mara ha mgbe na mpaghara Pacific niile, a maara ha dị ka ajọ ifufe. Dịka ị hụworo, ihe ndị a bụ oke ihe mbibi na-ebibi ihe niile dị n'ụzọ ha. Olileanya na n'ime afọ ndị ọzọ nke afọ, ike nke ihe ndị a agaghị akpata ọtụtụ ihe ma ọ bụ ọnwụ onwe onye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Typhoons » Oké ifufe na ajọ ifufe kachasị na-emebi ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya
Dobe ihe ruru ogo 9 iji mee ka ọkụ kwụsị
Okpomọkụ na-efegharị na Septemba, ihe ọhụrụ